जितपछि मोदीले धन्यवाद दिँदै के भने? – Himshikharnews.com
जितपछि मोदीले धन्यवाद दिँदै के भने?
१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १३:५१
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई थप पाँच वर्षको कार्यकालका निम्ति ‘ऐतिहासिक जनादेश’ दिएको प्रति भारतीय जनतालाई धन्यवाद भनेका छन्।
बिहीवार साँझ दिल्लीस्थित पार्टी मुख्यालयमा प्रवेश गर्दा उनलाई समर्थकहरूले गुलाफको फूल वर्षाएर स्वागत गरेका थिए।
मतगणना हुँदै गर्दा लोकसभाको ५४३ सीटमध्ये भाजपाले करिब ३०० सीट जित्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। उसको गठबन्धनले ३४० भन्दा धेरै सीट जित्न सक्छ। सो दलले सन् २०१४ को निर्वाचनमा भन्दा धेरै मत प्राप्त गर्ने जित्ने देखिएको छ।रिपोर्टर्सनेपाल.कमबाट